स्टेसनरी महासङ्घको जिल्ला अधिवेशन
काठमाडौँ । नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासङ्घ काठमाडौँ जिल्ला समितिको छैटौँ जिल्ला अधिवेशन २०७५ भदौ २३ गते राजधानीको हार्दिक होटेलमा सम्पन्न भएको छ ।
महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला सचिव शिव सागर शर्माको सञ्चालन तथा जिल्ला अध्यक्ष घनश्याम खनालको अध्यक्षतामा अगाडि बढेको सो सम्मेलनको उद्घाटन महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष हरि प्रसाद अर्यालले गर्नु भएको थियो । सम्मेलनमा जिल्ला समितिका उपाध्यक्ष टुकनाथ शर्माले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको थियो ।
सम्मेलनले महेश शर्माको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय महासङ्घको जिल्ला समिति निर्वाचित गरेको छ । समितिको प्रथम उपाध्यक्षमा मान कुमार श्रेष्ठ, द्वितीय उपाध्यक्षमा नारायण, सचिवमा श्रीधर आचार्य, सहसचिवमा गोकुल घिमिरे र कोषाध्यक्षमा देवका आचार्य रहनु भएको छ भने समितिमा मधु कुमार क्षेत्री सहितका छ जना सदस्यहरू रहनु भएको छ ।
सम्मेलनको अन्तमा निवर्तमान अध्यक्ष घनश्याम खनालले नव निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गर्नुका साथै गहकिलो मन्तव्यका साथ कार्यक्रमको समापन गर्नु भएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानमा उडान थप्दै
काठमाडौँ । सरकारले सन् २०२०लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरेपछि पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीले नेपालमा एकपछि अर्को उडान थप्दै लगेका छन् । थाइल्यान्डको थाइलाइन एयरले नेपालमा उडान सुरु गरेको दुई साता नबित्दै ओमनको सलाम एयरले भाद्र २६ गतेदेखि काठमाडौँमा उडान सुरु गरेको छ ।
हाल विभिन्न ३२ अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवा प्रदायकले काठमाडौँमा उडान गर्दै आएका छन् । नेपालको व्यावसायिक समूह आई.एम.ई. ले प्रबद्र्धन गरेको आई.एम.ई. इन्टरनेसनल ट्राभल्सको संयोजनमा ओमनको सलाम एयरले काठमाडौँ उडान सुरु गरेको हो । कुल एक सय ७४ सिट क्षमता रहेको सो विमान २६ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो ।
सस्तो भाडामा नै सेवा दिने लक्ष्यका साथ आफूहरूले ओमनको “बजेट एयरलाइन्स” भित्राएको आई.एम.ई. समूहका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले जानकारी दिए । यात्रुले १६ हजार भाडा तिरेर ओमन उड्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो एयरलाइन्सले २६ गतेदेखि नियमित रूपमा हरेक दिन बिहान ८ बजे अवतरण र ८ः४० मा उडान भर्ने गरी तालिका मिलाइएको छ ।
विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आई.एम.ई. समूहका अध्यक्ष ढकालले सस्तो मूल्यमै जहाज चढेर ओमन जान–आउन पाइने गरी व्यवस्था मिलाइएको बताए । ओमनको पहिलो बजेट एयरलाइन्सको रूपमा सन् २०१७देखि व्यावसायिक उडान सुरु गरेको हो । सलाम एयरले मस्कटलाई केन्द्र बनाएर कुल एक ७४ सिट क्षमताको एयरबस ३२० जहाजले विभिन्न १५ स्थानमा उडान गर्दै आएको छ । काठमाडौँ उडान थपिएपछि सो विमान कम्पनीको सोहौँ गन्तव्य भएको हो । सलाम एयरले ढाका, बाकु, टिबलिस, दोहा, दुबई, सिलकोट, मुल्तान, कराँची, खार्तुम, जेद्दा, सलाला, सुहार, मस्कट र काठमाडौँमा उडान भर्नेछ । सलाम एयरले यात्रुको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै तीन प्रकारका हवाइभाडा निर्धारण गरिएको छ ।
नेपालको पर्यटन प्रबद्र्धनमा पनि सहयोग पुग्ने र सरकारको २०२० सम्मको पर्टयक पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखेकामा नयाँ विमान कम्पनीले सहयोग पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ । कार्यक्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक राज कुमार क्षेत्रीले विमानस्थलको व्यस्त कार्यतालिकाबाट मिलाएर बिहानको समयमा उडान तथा अवतरणको कार्यतालिका मिलाइएको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाको वडा भेला सम्पन्न
बागलुङ । राष्ट्रिय जनमोर्चा बागलुङ नगरपालिका–१३ को वडा भेला पैयुपाटामा २०७५ भाद्र २१ गते सम्पन्न भएको छ । भेलाको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा बागलुङका अध्यक्ष अमर थापाले सङ्घीयताको कारण जनताले दुःख पाएको बताउनु भएको थियो ।
भेलामा बागलुङ नगर सभा सदस्य लोकनाथ शर्मा, राजमो बागलुङ नगर अध्यक्ष तथा जिल्ला सदस्य थानेश्वर सुवेदी, नगर कोषाध्यक्ष आशा रोकाले शुभकामना दिनु भएको थियो । भेलाको अध्यक्षता भैर बहादुर रोका, सञ्चालन प्रेम रोका र स्वागत कृष्ण लामिछानेले गर्नु भएको थियो ।
भेलाले भैर बहादुर रोकाको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय राजमोको वडा समिति गठन गरेको छ, जसको उपाध्यक्षमा दन्तकली रोका, सचिवमा प्रेम बहादुर रोका, सहसचिवमा मिलन भट्ट र कोषाध्यक्ष निर्मला रोका रहनु भएको छ । त्यस्तै, सदस्यहरू कमला क्षेत्री, ओम प्रकाश पौडेल, तोयानाथ रेग्मी, सु. तिलक बहादुर रोका, धनराज रिजाल, केदार पौडेल, तिलक बहादुर रोका र कृष्ण लामिछाने रहनु भएको छ ।
सञ्चार सामग्री डाउन
काठमाडौँ । पत्रकार महासङ्घले भदौ १ गतेदेखि लागु भएको मुलुकी संहितामा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान भएकाले त्यसलाई हटाउने माग गर्दै प्रथम चरणको कार्यक्रमको अन्तिम दिन २०७५ भदौ २२ गते सञ्चार सामग्री डाउन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । नयाँ बानेश्वरमा जम्मा भएका सयौँ पत्रकारहरूले कार्यक्रम क्यामरा, रकर्डर, कलम लगायतका सञ्चार सामग्री डाउन गरेका थिए ।
महासङ्घका सचिव राम प्रसाद दाहालले उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नु भएको थियो । आन्दोलनको विषयवस्तु महासचिव रमेश विष्टले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी मुलुकी संहिता तत्कालै सच्चाउनु पर्ने अन्यथा पत्रकार महासङ्घले आन्दोलनको नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने बताउनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा पत्रकार सङ्गठनका अगुवाहरूले पनि मन्तव्य राख्नु भएको थियो । मन्तव्य व्यक्त गर्नेहरूमा विकास कार्की, सन्तराम विडारी, बी.बी. कार्की, ऋषि धमला, दामोदर दवाडी, अर्जुन ढकाल, अजय बाबु शिवाकोटी, सागर श्रेष्ठ, देवेन्द्र फुँयाल, हरि रेग्मी, विष्णु सापकोटा सुगल, पुरु रिजाल, दिलिप थापा लगायत हुनु हुन्थ्यो ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाले अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद तथा अन्तरदेशीय सङ्गठित र अवैध लागु औषध कारोवार विरुद्ध सहयोगसम्बन्धी बिम्स्टेक महासन्धिलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ ।
२०७५ भाद्र २६ गतेको बैठकमा गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकले “अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५” पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले त्यससम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
त्यस्तै “जैविक विविधता महासन्धि अन्तर्गत जारी भएको आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच र तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको निष्पक्ष र समन्यायिक बाँडफाँटसम्बन्धी नायोगा अभिसन्धि सम्मेलन गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावलाई सर्वसम्मतीले स्वीकृति गरेको छ । बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले सोसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र प्रसाद अधिकारीले राखेको “अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ परिवहन विषयक नियम एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धि”माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले “अपराध पीडितको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५”सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन’ पेश गरेका थिए ।
तिजी कार्यक्रम सम्पन्न
पोखरा । रक्तिम सांस्कृतिक अभियान कास्कीले प्रगतिशील तिजी गीत कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा रक्तिमका कलाकाहरूद्वारा “विदेशबाट ल्याएको सङ्घीयताले, “अधिकार पाइँदैन चुप लागि बसेर”, “बेचविखन र बलात्कार जताततै डर बरिलै” लगायतका तीज गीतहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा उपस्थितले प्रगतिशील तीज गीतमा छमछम नाचेर मनोरञ्जन लिएका थिए । वर्तमान अवस्थामा तीज भड्किलो भइरहेकोमा यसलाई प्रगतिशील रूपमा पनि मान्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण रक्तिम कास्कीका कलाकारले देखाएको उपस्थित समुदायले बताएका थिए । गीत र नृत्य मार्फत्् नेपाली जनतालाई सजग र सचेत रहन आग्रह गर्दै सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चा गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शङ्कर बरालले शुभकामना दिनु भएको थियो ।
रक्तिम सांस्कृतिक अभियान जिल्ला समिति कास्कीका अध्यक्ष बिमल पाण्डेको अध्यक्षता रहेको कार्यक्रमको सञ्चालन जिल्ला सचिव दिपा थापाले गर्नु भएको थियो ।
ज्यान मार्ने धम्कीपछि राजीनामा
काठमाडौँ । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिका सदस्य वीरेन्द्र केसीले राजीनामा दिएपछि सो घटना झन् रहस्यमय बन्दै गएको छ ।
समितिको सदस्यबाट भदौ २५ गते राजीनामा दिएका केसीले ज्यान जोखिममा पारेर काम गर्न नसकेका कारण आफूले राजीनामा दिएको बताएका थिए । केसीले छानबिन समितिमा बसेर काम गरेका कारण आफू र आफ्नो परिवारको ज्यान जोखिममा रहेको पनि बताए, यद्यपि ज्यान मार्ने धम्की कोबाट आएको हो, त्यो उनले खुलाएका छैनन् । तर, उनले आफू असुरक्षित भएको कुरा पत्रकार सम्मेलनमै बताएका थिए ।
समितिमा बसेर निर्मला पन्तका हत्यारालाई सजाय दिन नसक्ने निष्कर्षका साथ आफू समितिबाट बाहिरिएको पनि केसीले बताए । उनले भने– “म त्यो समितिमा रहेर निर्मला पन्तका वास्तविक हत्यारा–अपराधीलाई सजाय दिन सक्दिनँ र निर्मला पन्तको परिवारलाई न्याय दिन पनि सक्दिनँ । अपराधीलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने भएपछि त्यो पदमा किन बस्ने ?” त्यससँगै उनले उच्च स्तरीय समितिले अहिलेसम्म गरेका कामबारे पनि खुलाउन चाहेका छैनन् । केसीले सबै कुरा खुलाउँदा समाजमा अशान्ति हुने आशङ्का व्यक्त गरे । उनले कञ्चनपुरवासीको आन्दोलन जायज रहेको बताए । साथै, त्यहाँका जनताप्रति आफ्नो सहानुभूति रहेको पनि उल्लेख गरे ।
समिति सदस्यले नै ज्यान जोखिममा पारेर छानबिन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि निर्मला बलात्कार तथा हत्याकाण्डबारे कैयौँ प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । समितिका सदस्यले नै समितिमा बसेर अपराधीलाई सजाय दिन नसकिने भयो भनेपछि अब न्याय पाउने आशा मरेको निर्मलाका बुबा यज्ञराज पन्त बताउँछन् । साउन १० गते साथी रोशनी बमको घरमा होमवर्क गर्न गएकी बालिका निर्मला पन्तको अर्को दिन बलात्कारपछि हत्या भएको अवस्थामा नजिकैको उखुबारीमा शव फेला परेको थियो ।
निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या गर्नेलाई कारवाही हुनु पर्ने भन्दै कञ्चनपुरमा लामो समयसम्म आन्दोलन भयो । प्रहरीले बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै छब्बिसौँ दिनमा मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका दिलिप सिंह विष्टलाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेपछि आन्दोलन थप चर्किएको थियो । प्रहरीले अपराधी लुकाउन भूमिका खेलेको भन्दै उच्च स्तरीय छानबिनको माग गरी कञ्चनपुरवासीले आन्दोलन चर्काए । त्यस क्रममा प्रहरीले आन्दोलन दबाउन चलाएको गोली लागेर एकजनाको ज्यान गयो भने केही घाइते भएका छन् । स्थानीयको दबाबपछि सरकारले कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई फिर्ता बोलाइ सहसचिव हरि प्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो ।
सोही समितिका सदस्य केसीले आफूमाथि ज्यान मार्ने धम्की आएको र निर्मला पन्तलाई न्याय दिन नसकिने भन्दै राजीनामा दिएपछि घटनामा “ठुलै मान्छे” को हात रहेको स्पष्ट भएको छ ।
मन्दिर पसे दलितलाई मार्ने धम्की
सिमरा । बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका–७ झवानी टोलको शिवपार्वती मन्दिरमा शुक्रबार बिहान दलित र गैर दलितले एकैसाथ पूजापाठ गर्ने तयारी थियो । तर दलितहरू घरबाटै ननिस्किएपछि एकसाथ पूजापाठ गर्ने कार्यक्रम हुन सकेन । सार्वजनिक जग्गामा चार दशक अघि निर्माण गरेको मन्दिरमा दलितलाई प्रवेश र पूजापाठ गर्न नदिएपछि सोमवार दलित र विभिन्न सङ्गठनले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
प्रदर्शनपछि बुधबार नगरपालिकाका मेयर विजय शङ्कर यादवको पहलमा गाउँमा सर्वपक्षीय बैठक बस्यो । बैठकले दलितमाथि भइरहेको छुवाछूतको विभेद अन्त्य गर्न भन्दै शुक्रबार एकसाथ पूजापाठ गर्ने कार्यक्रम राखेको हो । बैठकले वडा अध्यक्ष रमेश कुशवाहाको संयोजकत्वमा नौ सदस्य मन्दिर सञ्चालन समिति पनि गठन गर्‍यो । समितिमा दलित समुदायका चार र गैर दलित समुदायका पाँच सदस्य राखियो ।
बुधबारको सर्वदलीय बैठकको सहमति अनुसार शुक्रबार पूजापाठको समय तोकिएके भए पनि दलितहरू पूजापाठको कार्यक्रममा सहभागी नभएका हुन् । “मन्दिरमा पसे गोली हानेर मार्ने नै धम्की आएपछि घरबाट कसरी निस्कनु ?” दलित बस्तीका रामबाबुराम चमारले प्रश्न गर्दै भने– “हामीलाई मन्दिरको पूजापाठभन्दा आफ्नो र छोराछोरीको ज्यान नै प्यारो छ, मन्दिरमा छिरेर पूजापाठ गर्दा ज्यान नै रहदैन भने किन जानु ?”
सर्वदलीय सहमति विपरीत गैरदलितले दलितमाथि मार्ने धम्की दिएकोप्रति नेपाल मानव अधिकार सङ्गठन बाराका सचिव राज नारायणले आपत्ति जनाएका छन् । धम्की दिएपछि मन्दिरमा पूजापाठ गर्न नगएको दलित महिला वडा सदस्य सरस्वती देवी रामको भनाइ छ । “मन्दिरमा पस्याँै भने लाश बिछ्याउँछौँ पनि भने” सरस्वतीले भनिन्– “यति उपद्रो गरेपछि डरले हामी मन्दिरमा नगएका हौँ ।” मानव अधिकार सङ्गठन बाराका सचिव रामले झवानीका दलितमाथि गैर दलितले सिर्जना गरेको त्रास हटाउनका लागि पहल गर्ने बताएका छन् ।
करिब एक सय ५० घर धुरी रहेको झवानी टोलमा चमार जातिका १०÷१२ घरधुरी छन् । बाँकी ब्राह्मण, राजपुत, सहनी, तेली र नुनिया जातिको बसोबास छ । मन्दिरको स्थापना भएदेखि नै दलितलाई मन्दिरमा पस्न र पूजापाठ गर्न गैर दलितले नदिएको स्थानीय विनोद महरा चमारले बताए। दलितले मन्दिरभित्र पूजा गरे मन्दिर अपवित्र हुने भन्दै गैर दलितले दलितलाई मन्दिरमा पूजापाठ गर्न नदिएको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाको घरदैलो तथा सङ्गठनात्मक अभियान सम्पन्न
दाङ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले दाङ जिल्लाका विभिन्न गाउँ तथा नगरमा जन भेटघाट एवं घरदैलो अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । यसै क्रममा २०७५ भदौ २२ गते घरदैलो तथा सदस्यता अभियानको सिलसिलामा गढवा गाउँपालिका–४ को हडैया र गोविन्द नगरमा अलग अलग टोल समितिहरू गठन भएका छन् । गोविन्दनगरमा तारा केसीको अध्यक्षतामा टोल समिति गठन गरिएको छ । समितिको उपाध्यक्षमा सुनिता केसी, सचिवमा एलिया चौधरी, कोषाध्यक्षमा दान बहादुर बोगटी, सहसचिवमा राजु थापा तथा सदस्यहरूमा झम्का बोटे कुमाल, राम बहादुर नेपाली, तुल्सी विक, सीता केसी रहनु भएको छ ।
त्यसैगरी हडैया टोल समितिको अध्यक्षमा मालती केसी, उपाध्यक्षमा लाल बहादुर थापा, सचिवमा ममता केसी, कोषाध्यक्षमा थमा अधिकारी, सहसचिवमा सकित्रा खत्री रहनु भएको छ । सदस्यहरूमा रुकमणि खनाल तथा एक स्थान रिक्त रहेको छ । कार्यक्रममा राजमोका जिल्ला सदस्य तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कपिल देव खनाल, जिल्ला सदस्य तथा गाउँपालिका सचिव टुकमान कुवँर, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ जिल्ला सचिव चन्द्र बहादुर केसी, अखिल नेपाल महिला सङ्घ जिल्ला सदस्य गौरी खड्का, वडा नम्बर ४ अध्यक्ष मिना रायमाझी लगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियो ।
राजमो टिकापुरको नगर भेला सम्पन्न
कैलाली । राष्ट्रिय जनमोर्चा टिकापुरको नगर भेला २०७५ भाद्र २३ गते टिकापुरमा सम्पन्न भएको छ । भेलाले यम नारायण पोख्रेलको अध्यक्षता मा १३ सदस्यीय नगर समिति गठन गरेको छ । समितिको उपाध्यक्षमा धु्रुव बहादुर शाह, सचिवमा नरेश राज गिरी, कोषाध्यक्षमा विनोद केसी र सदस्यमा सीमा कठरिया, समीक्षा सिंह, सिमरन साउँद, सङ्गीता चौधरी, उमा सञ्ज्याल, जयधर्म न्यौपाने, चित्रकला विक र कविता भट्ट रहनु भएको छ भने एक स्थान रिक्त राखिएको छ।
राजमोका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष तथा प्रदेश नं ७ का सचिवालय सदस्य तिलक परियारको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको भेलाको सञ्चालन नरेशराज गिरी तथा स्वागत नवराज सञ्ज्यालले गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा राजमो कैलालीका उपाध्यक्ष दयाराम सञ्ज्याल, अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घका जिल्ला सहसचिव नवराज सञ्ज्याल, रक्तिम सांस्कृतिक अभियानका जिल्ला सदस्य सृजना परियार, टेकराज न्यौपाने लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो ।
अखिल (छैठौँ) दाङ सम्मेलनको तयारीमा
दाङ । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (छैठौँ) जिल्ला समिति दाङले अगामी असोज १३ गते सदरमुकाम घोराहीमा पन्ध्रौँ जिल्ला सम्मेलन गर्ने भएको छ ।
सम्मेलनको नारा ‘शैक्षिक निजीकरण, उदारीकरण र सङ्घीयता विरुद्धको हाम्रो आन्दोलन ! जनवादी शिक्षा र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि पन्ध्रौँ जिल्ला सम्मेलन !’ तय गरिएको छ । २०७५ भाद्र २३ गते घोराहीमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको जिल्ला अध्यक्ष वसन्त आचार्यद्वारा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
आगामी असोज २६देखि २८सम्म झापाको बिर्तामोडमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा जिल्ला सम्मेलन गर्न लागिएको हो । सम्मेलन तयारीका लागि अध्यक्ष वसन्त आचार्यको नेतृत्वमा तीन सदसीय मूल व्यवस्थापन समिति, सचिव ध्रुव बेल्बासेको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय प्रचार प्रसार समिति, उपाध्यक्ष सरिता पुनको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय सम्मेलन स्थल व्यवस्थापन समिति र कोषाध्यक्ष शर्मिला चौधरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आर्थिक समिति बनाइएको छ ।
बैठकमा सङ्गठनका पर्व केन्द्रीय सचिव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङ जिल्ला अध्यक्ष गणेश आचार्यको विशेष उपस्थिति थियो ।
अखिल (छैठौँ) को विविध कार्यक्रम सम्पन्न
बागलुङ । अखिल (छैठौँ) ले बागलुङको बडिगाड–१ दगास्थित खड्गदेवी माविमा विविध विविध कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । महासचिव भिमलाल पोखरेलको प्रमुख अतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा माध्यमिक तहको वक्तृत्व कला, रेकर्ड डान्स, हाजिरीजबाफ लगायत प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो ।
वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा सागर वन प्रथम, विपना दर्लामी द्वितीय, सनम भुजेल तृतीय र लक्ष्मी थापाले सान्त्वना पुरस्कार पाउनु भएको थियो । त्यस्तै, आधारभूत तहको रेकर्ड डान्समा दशरथ सदनका अनिता वन र धनमाया थापा प्रथम, धर्म सदनका पुष्पा भुजेल र करिश्मा भुजेल द्वितीय, गङ्गा सदनका देवी राना र करुणा घर्ती तृतीय र सुक्र सदनका चन्द्रा दर्लामी र सागर दर्लामीले सान्त्वना पुरस्कार पाए । त्यसैगरी, प्रावि तहको हाजिरीजबाफ प्रतियोगितमा रेड हाउस गु्रप प्रथम, ग्रिन हाउस ग्रूप द्वितीय र एल्लो हाउस गु्रप तृतीय भएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि महासचिव पोखरेलले मन्तव्य राख्नु भएको थियो । कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष बोम बहादुर थापा, वडा सदस्य अनिल गिरी र विद्यालयका प्रधानाध्यापक वेद प्रसाद पोखरेलले शुभकामना दिनु भएको थियो । कार्यक्रम हिरा बहादुर दर्लामीको अध्यक्षता, कर्ण बहादुर नेपालीको सञ्चालन र सृजना गिरीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको थियो ।
बागलुङ । राष्ट्रिय जनमोर्चा गल्कोट नगरपालिका–को वडा भेला काडेवासमा २०७५ भाद्र २३ गते सम्पन्न भएको छ । भेलाले श्याम सुनारको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय वडा समिति गठन गरेको छ, जसको उपाध्यक्षमा भिमलाल गौतम, सचिवमा चुडामणि कँडेल, सहसचिवमा सुनकली आचार्य र कोषाध्यक्षमा भिम बहादुर केसी रहनु भएको छ । सदस्यहरूमा विकास सुनार, अर्जुन केसी र गङ्गा बहादुर दर्जी रहनु भएको छ भने सल्लाहकारमा अग्निधर कँडेल, चन्द्र बहादुर आचार्य, रुद्र बहादुर केसी र मन बहादुर पुन रहनु भएको छ ।
भेलाको उद्घाटन राजमो बागलुङका उपाध्यक्ष बेदीलाल सापकोटाले गर्नु भएको थियो । राजमो गल्कोट नगर समितिका सदस्य नारायण सापकोटाले शुभकामना मन्तव्य दिनु भएको सो भेलाको अध्यक्षता चुडामणि कँडेलले, सञ्चालन भिम बहादुर केसीले र स्वागत श्याम सुनारले गर्नु भएको थियो ।
दाङमा युवक सङ्घको ‘जागौँ युवा, लागौँ युवा’ अभियान
दाङ । अखिल नेपाल युवक सङ्घले दाङमा ‘जागौँ युवा, लागौँ युवा’ अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । अभियान अन्तर्गत दाङमा युवक सङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला अध्यक्ष चित्र एमसीको प्रमुख आतिथ्यतामा घोराही उपमहानगरपालिका स्तरीय प्रथम सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।
सम्मेलनले डोर बहादुर केसीको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय उपमहानगर समिति चयन गरेको छ, जसको उपाध्यक्षमा श्रीराम भट्टराई, सचिवमा दीपक आर.सी., सहसचिवमा शोभाखर आचार्य र कोषध्यक्षमा दीपक केसी रहनु भएको छ । सदस्यहरूमा सोम बहादुर विष्ट, शङ्कर घर्ती मगर, मनोज पुन, हरि खनाल, वसन्त खरेल र विजय नेपाली रहनु भएको छ भने एक स्थान रिक्त राखिएको छ ।
युवक सङ्घका जिल्ला सदस्य डोर बहादुर केसीको अध्यक्षता तथा अर्का जिल्ला सदस्य दीपक आर.सी. को स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको सम्मेलनमा राजमो ६ नम्बर प्रदेश सदस्य रेशम बिसी, राजमो दाङका अध्यक्ष गणेश आचार्य र अखिल नेपाल बुद्धिजीवी सङ्घका पूर्व महासचिव शशिधर भण्डारीले शुभकामना दिनु भएको थियो ।
त्यस्तै, अखिल नेपाल किसान महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष मिनु सुवेदी, अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनका जिल्ला सदस्य मङ्गल घर्ती मगर, राजमो नगर समितिका कोषाध्यक्ष चन्द्र बहादुर रावत, राजमो उपमहानगरपालिकाका–१० नम्बर वडा अध्यक्ष खिम बहादुर वली, अखिल नेपाल महिला सङ्घकी नगर उपाध्यक्ष वशन्ता भट्टराई र युवक सङ्घका जिल्ला सदस्य हेमा पोख्रल लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो । सम्मेलनको सहजीकरण युवा नेता श्रीराम भट्टराईले गर्नु भएको थियो । निर्वाचित समितिलाई जिल्ला अध्यक्ष चित्र एमसी र युवक सङ्घका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष काशिनाथ पोख्रेलले अबिर लगाई बधाइ तथा शुभकामना दिनु भएको थियो ।
अन्धविश्वास र विकृतिका विरुद्ध सचेतना फैलाउँदै अखिल (छैठौँ)
सन्धिखर्क । अखिल (छैठौँ) ले अर्घाखाँचीका विभिन्न विद्यालयमा सामाजिक अन्धविश्वास र विकृतिका विरुद्ध सचेतना अभियान थालेको छ । आगामी असोजको ५ र ६ गते सन्धिखर्कमा चौबिसौँ जिल्ला सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको अखिल (छैठौँ) ले सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा साङ्गठानिक गतिविधिको साथसाथै सामाजिक सचेतना अभियान पनि सञ्चालन गरेको हो ।
यसै क्रममा अखिल (छैठौँ) अर्घाखाँचीले शान्ति मावि र शिद्ध मावि मालारानी–५ बाँगीमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा अखिल (छैठौँ) का जिल्ला सहसचिव सन्देश खनाल, सदस्य आकाश भाट र सिद्धार्थ भाटले मन्तव्य राख्नु भएको थियो । विषयगत प्रशिक्षणपछि भेलाले आशिष टन्डनको अध्यक्षतामा ५३ सदस्यीय अखिल (छैठौँ) शान्ति मावि मूल एकाइ समिति गठन गरेको छ, जसको उपाध्यक्षमा पूजा कुँवर, सचिवमा आकृति खनाल, सहसचिवमा सीता आचार्य र कोषाध्यक्षमा निश्चल बस्नेत निर्वाचित हुनु भएको छ ।
यस्तै, भेलाले नविन खत्रीको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय अखिल (छैठौँ) शिद्ध मावि मूल एकाइ समिति पनि गठन गरेको छ, जसको उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्षमा अर्जुन घर्ती, सचिन कुँवर, कविता भुसाल र सन्तोष कुँवर चयन हुनु भएको छ । अखिल (छैठौँ) ले यही असौज २६, २७ र २८ गते झापाको बिर्तामोडमा एक्काइसौँ राष्ट्रिय सम्मेलन समेत गर्दैछ ।
महिला सङ्घको नगर समिति गठन
परासी । अखिल नेपाल महिला सङ्घले मनरूपा रानाको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय सुनवल नगर समिति गठन गरेको छ ।
समितिको उपाध्यक्षमा उमा पौडेल, सचिवमा तारा गौतम र कोषाध्यक्षमा सीता अधिकारी रहनु भएको छ । सदस्यहरूमा शान्ता पौडेल, सीता थापा, देवी पौडेल, भगवति थापा र शर्मिला पौडेल रहनु भएको छ । ज्येष्ठ सदस्य रेवती घिमिरेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन मनरूपा रानाले गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि महिला सङ्घकी नवलपरासी जिल्ला अध्यक्ष समझना सुवेदी र तिलक सुवेदीको विशेष उपस्थिति रहेको थियो ।
त्यस्तै, महिला सङ्घ सुनवल नगरपालिकाको वडा नम्बर १० गैडाखालमा पनि वडा समिति गठन भएको छ । २०७५ भाद्र २१ गते सम्पन्न कार्यक्रममा महिला सङ्घकी जिल्ला अध्यक्ष सम्झना सुवेदी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला सचिव तिलक सुवेदीको विशेष उपस्थिति रहेको थियो । नवगठित समितिको अध्यक्षमा सीता थापा, उपाध्यक्ष देउमती थापा, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी बुढाथोकी थापा, सचिव धनमाया थापा र सहसचिव श्यामकली थापा रहनु भएको छ । सदस्यमा मीना क्षेत्री, यमुना थापा, कल्पना थापा, तुलसी थापा, रेनु पुन र कौसिला थापा रहनु भएको छ ।
अफगानिस्तानमा प्रहरीचौकीमाथि तालिबानी लडाकुको आक्रमण
काबुल । अफगानिस्तानको उत्तरी कुन्दुज प्रान्तमा सोमबार एक प्रहरी चौकीमा यहाँका सशस्त्र तालिबानले आक्रमण गरेका छन् । आक्रमणमा परी कम्तीमा १३ जना प्रहरीको ज्यान गएको छ । त्यसैगरी सो आक्रमणमा परी आक्रमणकारी तालिबानका १० जना लडाकु पनि मारिएका छन् । कुन्दुजका प्रहरी प्रमुखले सो जानकारी दिए ।
कुन्दुजको दासित ई आर्ची जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालय नजिकै रहेको सो प्रहरी चौकीमा सोमबार बिहानीपख तालिबानले शक्तिशाली बन्दुक र रकेट लन्चर जस्ता अत्याधुनिक हतियारहरूले आक्रमण गरेको प्रहरीले जनाएका छन् । सो जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयलाई यस अघि पनि तालिबानले लक्षित गर्ने गरेका थिए । गत हप्ता मात्र पनि सो जिल्लामा उनीहरूले हमला गरेका थिए ।
त्यसैगरी अफगानिस्तानको अर्काे प्रान्त बाघलानमा पनि गत शुक्रबार भएको यस्तै हमलामा परी अफगानिस्तानका २० जना सैनिकको ज्यान गएको थियो । कुन्दुज र बाघलान अफगानिस्तानको पूर्वी क्षेत्रमा पर्दछन् । सो क्षेत्रमा तालिबानहरूको बढी नै प्रभाव रही आएको बताइएको छ । (एजेन्सी)
विपक्षी नेता केम कारागार मुक्त
नोमपेन्ह । राष्ट्रद्रोहको मुद्दामा एक वर्षदेखि कारागारमा रहेका कम्बोडियाका विपक्षी नेता केम सोखा कारागारमुक्त भएका छन् । गत जुलाइर्मा सम्पन्न संसदीय चुनावमा हुन सेनको सत्तारूढ दलले पूर्ण बहुमत ल्याएर विजयी भएपछि विपक्षी नेता कारागारमुक्त भएका हुन् । कम्बोडियाको विपक्षी दल नेसनल रेस्क्यू पार्टी (सी.एन.आर.पी.) का अध्यक्ष केम सोखालाई सेप्टेम्बर ३, २०१७ मा गिरफ्तार गरी राज्यद्रोहको आरोपमा कारागारमा राखिएको थियो ।
विपक्षी नेता सोखामाथिको आरोप राजनीतिक प्रेरित रहेको बताइन्छ । पक्राउ परेको दुई महिनापछि नै सोखाको दल सी.एन.आर.पी.लाई अदालतले भङ्ग गरिदिएको थियो । विपक्षी दलको विघटन र त्यसका अध्यक्ष पक्राउ परे लगत्तै संसदीय चुनाव गरिएका कारण प्रधानमन्त्री हुन सेनको कम्बोडिया पिपुल्स पार्टीलाई संसदका सबै १२५ स्थान जित्ने अवसर मिलेको थियो ।
कम्बोडियाको दुर्गम स्थानमा रहेको कारागारबाट रिहा भएलगत्तै राजधानी नोमपेन्ह आएका सोखालाई स्वागत गर्न उनका समर्थक र सञ्चार कर्मीको राजधानीमा ठुलै भिड लागेको थियो । नोमपेन्हको अदालतले सोखालाई धरौटीमा रिहा गरिएको र देश छाड्न अनुमति नदिइएको जनाएको छ । राष्ट्रद्रोहको आरोपमा दोषी ठहरिए सोखाले ३० वर्षको कारागार सजाय पाउनेछन् । (एजेन्सी)
जापानमा गएको भूकम्पमा परी ४४भन्दा बढीको मृत्यु
टोक्यो । उत्तरी जापानमा गत साताको भूकम्पका कारण सिर्जित पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४४ जना पुगेको स्थानीय प्रहरी अधिकारीले जनाएका छन् । भूकम्प पीडितको उद्धार र राहतका लागि अझै पनि दशौँ हजार सेना र प्रहरी परिचालन गरिएको छ । मन्त्री परिषद्का मुख्य सचिव योसिहिडे सुगाले हराइरहेका व्यक्तिको खोजी कार्य सकिएको बताए ।
करिब ४० हजार प्रहरी, सेना र अन्य उद्धारकर्मीले अस्थायी शिविरमा आश्रय लिइरहेका दुई हजार सात सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई सहयोग गरिरहेका छन् । गत साता उत्तरी जापानको होक्काइडो द्वीप आसपास केन्द्रविन्दु भएको शक्तिशाली भूकम्प गएको थियो । मृत्यु भएका अधिकांश व्यक्ति सानो ग्रामीण इलाका आटसुमाका रहेका छन् । करिब ६.६ म्याग्निच्यूडको भूकम्पका कारण माथिबाट बगेको पहिरोले गाउँमा जनधनको ठुलो क्षति गरेको थियो । मुख्य सचिव सुगाले स्थानीय जनतालाई आफ्नो घरमा फिर्ता ल्याउन सरकारले सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउने बताए । उनले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ठुलो वर्षा हुने मौसम भविष्यवाणी अझै पनि प्राप्त भइरहेकाले जनधनको सुरक्षालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको संवाददाताहरूलाई बताए । (एजेन्सी)
सुडानमा विमान दुर्घटना हुँदा २१ जनाको मृत्यु
खार्तुम । दक्षिण सुडानको जुबा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको एक विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको छ । दुर्घटनामा २१ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा तीन जना बालबालिका समेत रहेका छन् । दुर्घटनामा एक जना बाँच्न सफल भएका छन् भने उनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ ।
विमानमा १९ यात्रु तीन चालक दलका सदस्य सहित २२ जना सवार थिए । दक्षिण सुडानका सूचना मन्त्री टाबन एबलका अनुसार विमान जुबाबाट इरोलतर्फ उडिरहेको थियो। दुर्घटनाग्रस्त विमान व्यवसायिक जहाज भएको मन्त्री अबेलले बताए । मृतकमध्ये अधिकांश इरोलका नागरिक रहेको बुझिएको छ ।
दुर्घटनापछि इरोल शहर शोकमा डुबेको छ । विमान अवतरण हुने समय बाक्लो हुस्सु लागेको र विमान अवतरणका लागि राम्रो अवस्था नरहेको भन्ने रिपोर्ट आफूले पाएको सूचना मन्त्रीले बताए । संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा सञ्चालित रेडियो मिरायाले अफ्नो आधिकारिक ट्विटर पेजमा विमानको भग्नावशेष पानीमा डुबेको तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ । दक्षिण सुडानमा भारवहन क्षमताभन्दा बढी यात्रु तथा सामान बोक्ने कुरा सामान्य रहँदै आएको गर्दा आइतबारको दुर्घटनाको कारण पनि यस्तै भएको हुन सक्ने विश्वास गरिएको छ । (एजेन्सी)
यौन हिंसाको आरोपपछि टेलीभिजनका सी.ई.ओ.द्वारा राजीनामा
वासिङटन । अमेरिकी प्रतिष्ठित टेलिभिजन प्रचारक कम्पनी सी.बी.एस. का कार्यकारी अधिकृत (सी.ई.ओ.) लेस मुन्भ्सले यौन हिंसाको आरोपपछि पदबाट राजीनामा दिएका छन् । गत जुलाईमा उनीमाथि एक महिलाले यौन हिंसा गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । त्यसबेला ६८ वर्षीय मुन्भ्सले आरोप गलत भएको बताएका थिए ।
आइतबार उनी विरुद्ध थप छ जना महिलाले यौन हिंसाको आरोप लगाएपछि उनी कार्यकारी अधिकृतको पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन् । विश्वभर ‘मिटु’ अभियान चलिरहेका बेला उनी यस झमेलामा फसेका हुन् । यस अघि मुन्भ्स आफैले महिला हिंसा विरुद्धको अभियानमा सहायता प्रदान गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर महिला हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउने मुन्भ्समाथि नै महिला हिंसाको आरोप लागेको छ । मुन्भ्सले यस अभियानमा सहयोग गर्ने भनेको २० मिलियन अमेरिकी डलर भने मिटु अभियानलाई नै प्रदान गरिने सी.बी.एस. कम्पनीले बताएको छ।
मुन्भ्सको राजीनामापछि सी.बी.एस. ले जोसेफ इनेलोलाई कम्पनीको कार्यकारी अधिकृत तथा प्रमुख बनाउने बताएको छ । अमेरिकी सञ्चार माध्यमका अनुसार कम्पनीले मुन्भ्सलाई सय मिलियन अमेरिकी डलर प्रदान गर्नेछ, यद्यपि यसमा सहयोगार्थ प्रदान गर्ने भनिएको २० मिलियन अमेरिकी डलरमा कटौती हुनेछ । १९९५ मा सी.बी.एस. का मनोरञ्जन प्रमुख मुन्भ्स २००६देखि प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत बनेका थिए । (एजेन्सी)